﻿Download Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Igbo from Official Microsoft Download Center
AfrikaansAmpharicAssameseAzeri (Latin)BaskiBengali (Bangladesh)Bengali (India)CatalanFilipinoGalicianGujaratiHausaIgboInuktitut (Latin)IrishisiXhosaisiZuluKannadaKhmerKiswahiliKonkaniKyrgyzLaoMalay (Brunei Darussalam)Malay (Malaysia)MalayalamMāoriMarathiNepaliOnye AlbaniaOnye ArmeniaOnye Bosnia (Cyrillic)Onye Bosnia (Latin)Onye GeorgiaOnye IcelandOnye Indonesia Onye LuxembourgOnye Macedonia (Bubu Yugoslav Repọbliki nke Macedonia)Onye Norway (Nynorsk)Onye Serbia (Cyrillic)OriyaPersianPunjabiQuechua (Peru)Sesotho sa LeboaSetswana (South Africa)SinhalaTamilTatarTeluguUrduUzbek (Latin)VietnameseWelshYoruba
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 ahụ– Igbo na eweta njikọ ojiarụ Igbo maka:
Usoronsieme Achọrọ: Àgbà Bekee nke ụdị Microsoft Office 2007 ọbụla nwere Excel, Outlook, Powerpoint maọbụ Word.
Ohere nke achọrọ na diiski: Na mgbakwụnye na oghere oba-nchekwa àmà nke eji were rụnye ugbua na usoronsieme Office 2007 gasị, 20 megabaịtị (MB) gasị nke ohere dị-adị na ọba-nchekwa àmà achọrọ.
Iji were rụnye mbutu a:
Butuo ihe LanguageInterfacePack.exe faịlụ ahụ sitena ị kère na Mbutu bọtịn (n'elu) na ichedo falụ ahụ na oba-nchekwa àmà gị.
Kère ugboro-abụọ na LanguageInterfacePack.exe faịlụ usoronsieme dị na ọba-nchekwa àmà gị iji were bido na usoronsieme Nwube ahụ.
Soru ihe-ntụziaka ahụ dị na ihu-kọmputa iji were mechaa nrụnye ahụ.
Ozigbo arụnyere faịl gụọm maka Microsoft Office 2007 Language Interface Pack gị na C:\_Program Files\_Common Files\_microsoft shared\_OFFICE12\_LCID\_LIPread.htm
Mmezulite nke Office 2003 nke nwere Office 2003 Language Interface Pack ruo na Office 2007 nke nwere Office 2007 Language Interface Pack ka akwadoghị. Ọbụrụ na ị chọrọ ịkwalite ntọala nke Office 2003 gị ruo na Office 2007 nke nwere Office 2007 Language Interface Pack ị tosịrị:
Wepụ-nrụnye Office 2003 Language Interface Pack
Bido nwube Office 2007 ma họrọ nhọrọ mmezulite.
Mgbe emechara nwube Office 2007, rụnye Office 2007 Language Interface Pack
Ime ka ngwaọrụ Office gị dị ìrè:
Ọ bụrụ na ịna-enwe nsogbu ịgụpụta Koòdu nrunye niile ahụ na mkparịta "Microsoft Office Activation Wizard", maọbụ koòdu nrunye anaghị egosipụta nkeọma mgbe ịna-eji Microsoft® Office Language Interface Pack 2007 arụ ọrụ, biko kagbuo wizaàd ma gafere na ngwaọrụ Bekee Microsoft Office gị.
Ihe-ntụziaka maka iji rụọ:
Iji were wegaharịa User Interface gị na asụsụ nke Microsoft Office Language Interface Pack 2007 ahụ – Igbo, soru nzo-ụkwụ a:
Malite Nwube Asụsụ Microsoft Office 2007 gasị sitena Bido\_Usoronsieme Nile\_Microsoft Office\_Ngwaọrụ Microsoft Office menu.
Họrọ ihe Gosipụta Asụsụ taabụ na n'ime ihe Gosipụta menu Microsoft Office na igbe mkpakọrịta gasị dị na: ndepụta kpụpụtara-akpụpụta, họrọ asụsụ ahụ nke ị chọrọ igosi. Asusụ nke ị họtara ga abụzi ngosi mburupụta.
Na ime Asụsụ Ngosipụta taabụ ị nwere nhọrọ ime ka ngosi Office gị na ngosi Windows gị dabaa. Asụsụ Windows gị ugbua ka aga edepụtara gị. Ọbụrụ na ị chọrọ ka ngosi Office gị na ngosi Windows gị dabaa họrọ Wube ngosi asụsụ Microsoft Office iji were dabaa na ngosi asụsụ Windows ahụ nye igbe akara. Nwube a na anọchi anya nhọrọ i mere na Na egosi menu Microsoft Office gasị na igbe mkpakọrịta gasị ndepụta.
Na ime Idezi Asụsụ gasị họrọ taabụ asụsụ ah nke ị chọrọ iji were nye-ike sitena Asụsụ Ndezi Dị-ugbua depụta ma kère Tụkwasa. Asụsụ nke ị họrọ ka aga egosipụta ugbua na Inye-ike Ndezi Asụsụ gasị ndepụta.
N'ime Idezi Asụsụ gasị họrọ taabụ asụsụ nke ị chọrọ ka ọbụrụ Asụsụ Ndezi Nkekachamkpa sitena Asụsụ Ndezi Nkekachamkpa ndepụta.
Kère na Dị-nma bọtịn.
Nwube asụsụ nke ị họrọ ga adị ìrè mgbe ọzọ ị ga ebido njirimee Office gị gasị.
Matakwa: Enweghị ike ị itinye enyemaka n'asụsụ nke Microsoft Office Language Interface Pack 2007– Igbo. Enyemaka ga na-adị n'asụsụ nke ejiri rụnye ya na mbụ.
Na egosipụta enyemaka mgbe niile na ndepụta akpụturu-akpụtu n'asụsụ ntọala.
Iji were wepụ mbutu a:
Soro ụzọ ndị a na Àgbà Windows XP Homu maọbụ Prọfeshọnalụ:
Pụọ na usoronsieme nile.
Kère ugboro-abụo na Tinye maọbụ Wepụ Usoronsieme gasị aịkọnụ na ime Panelụ Nchịkwa Windows.
Kère Microsoft Office Language Interface Pack 2007 n'ime Usoronsieme arụnyere ugbua gasị igbe, ugbua kère Wepụ bọtịn.
Soro ntụziaka enyere na ihu-kọmputa.
Soro nzo-ụkwụ a na Windows Vista:
Pụọ na usoronsieme niile.
Kère ugboro abụọ na Usoronsieme na Njirimara gasị aịkọnụ dị na Windows Panelụ Nchịkwa.
N'ime Wepụ-nrụnye maọbụ Gbanwee Usoronsieme nhọrọ, kère Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Igbo n'ime Usoronsieme arụnyere ugbua gasị igbe, ugbua họrọ Wepụ-nrụnye nhọrọ.
Soru ihe-ntụziaka nke dị na ihu-kọmputa.